चीनमा महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई किन खुवाइरहेछन् नपुंसक बनाउने औ’षधी ? - Nepali in Australia
चीनमा महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई किन खुवाइरहेछन् नपुंसक बनाउने औ’षधी ?
May 9, 2021 autherLeaveaComment on चीनमा महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌लाई किन खुवाइरहेछन् नपुंसक बनाउने औ’षधी ?
चीनमा श्रीमान्को धोकाबाट बच्नका लागि महिलाले नयाँ तरिकाको खोजी गरेका छन् । यस्तो तरिका जसबारे थाहा पाउँदा हरेक व्यक्ति जिल खान्छन् । पार्टनरले आफूलाई धोका नदिउन् र अन्य महिलासँग नसल्किउन् भनेर महिलाले आफ्ना श्रीमान्लाई औ’षधी खुवाइरहेका छन् । यो कुनै साधारण औ’षधी होइन, पुरुषलाई नपुंसक बनाउने औ’षधी हो ।
ग्लोबल टाइम्सको एक रिपोर्ट अनुसार चीनमा श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्लाई गो’प्य तरिकाले यस्तो औ’षधी खुवाइरहेका छन् जसका कारण उनीहरु नपुंसकताको शिकार हुने गर्छन् ।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एक लेखमार्फत् केही चिनियाँ श्रीमतीले आफ्ना श्रीमान्लाई गो’प्य तरिकाले डायगाइलस्टीलबेस्ट्रोल खुवाइरहेको पत्ता लागेको छ । जानकारीमा उल्लेख भए अनुसार यो औ’षधी एक प्रकारको सिन्थेटिक ए’स्ट्रोजन हो जसले पुरुषलाई इ’रेक्स’नबाट रोक्ने गर्छ । चीनमा हालै यस्ता किस्सा कहानी सोसल मिडियामा निकै भायरल भएका छन् ।
वि’च्याटमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार केही महिलाले अनलाइनमार्फत् औ’षधी अर्डर गरेको र गो’प्य तरिकाले खानामा वा पे’य प’दा’र्थमा मि’साएर आफ्ना श्रीमान्लाई दिने गरेका छन् । यो औ’षधी खाएपछि केही धोकेबाज श्रीमान्ले आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिन बन्द गरेको पनि बताइन्छ ।
लेखमा केही महिलाको प्रतिक्रिया पनि लिइएको छ । यसमा एक महिलाले औ’षधीलाई प्रभावकारी बताएक छिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो औ’षधीलाई कार्सिनोजनको रुपमा पहिचान गरेको छ ।एक महिलाले भनिन्, ‘यो औ’षधी मैले खुवाउन सुरु गरेको दुई हप्तापछि नै असर देखिन सुरु भयो । ’ महिलाले अब उनका श्रीमान् घरमा नै बस्ने र राम्रो व्यवहार गर्ने जानकारी दिइन् ।
यद्यपि, यो लेख सोसल मिडियामा भाइरल भएपछि अनलाइन प्लेटफर्मबाट यो औ’षधी गायब भयो । पत्रकारले लोकप्रिय अनलाइन प्लेटफर्ममा औ’षधी निकै खोजे तर पाउन नसकेको बताए ।नियाक्सिआंग मर्निङ हेराल्डका अनुसार केही स्थानमा अहिले पनि गो’प्य रुपमा सेतो पाउडरको रुपमा यो औ’षधी बेचिँदै छ जुन ग’न्धहीन छ र तुरुन्त पानीमा घोलिने गर्छ । एक पसलेले एक महिनाभित्र सयभन्दा बढी ग्राहकलाई यो औ’षधी बेचेको दाबी गरे ।
पसलमा काम गर्नेहरुका अनुसार औ’षधीले सामान्य रुपमा १५ दिनमा आफ्नो असर देखाउन सुरु गर्छ । राहतको कुरा के हो भने यो औ’षधीको से’वन गर्न बन्द गरेको २१ दिनमा इ’रे’क्सनको क्षमता २१ दिनमा फिर्ता हुन्छ ।
यस्तै चीनका कानूनी विशेषज्ञले यो क्रममा यदि श्रीमानलाई कुनै शा’रीरिक हा’नी भएको अवस्थामा यस्ता श्रीमतीले आ’परा’धिक कानूनको सामना गर्न पनि तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै यस्तो प्रकारको औ’षधी बेच्नेहरुले पनि कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँसम्म कि उनीहरुको लाइसेन्स सम्बन्धि लाइसेन्स पनि रद्द गर्न सकिन्छ ।
संसारका यी चार देश, जहाँ पुलिससँग ह’तियार हुँदैन, तर पनि छैन अपराध, खुसि छन् यहाँका जनता
भारतको हिमाचलमा भयानक चट्टानी पहिरो, ९ जनाको मृत्यु (भिडियो सहित)
थाइल्याण्डका राजपरिवारले नेपाललाई एक जहाज स्वास्थ्य सामग्री पठाउँदै